सम्झनामा कालिञ्चाेक यात्रा
उमा अधिकारी यात्रा भन्ने बित्तिकै आफू घुम्न गएको याद कसलाई पो नआउला र ? त्यसमाथि पनि आफूलाई धेरै नै घुम्न जान मन लागेको स्थान जस्तो कि आफूलाई मन परेको मान्छे
निर्माण व्यवसायीसँग घुस लिने अधिकृत पक्राउ
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीसँग घुस लिएको आरोपमा पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रदेश नं. ३ ललितपुरका लेखा अधिकृतलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको छ । सडक निर्माण ठेक्का सम्झौता भइ रकम लिन आएका व्यवसायीसँग
प्रहरीलाई एक हजारमा फकाउन खोज्ने भारतीय पक्राउ
भक्तपुर । ड्युटिमा खटिएको प्रहरीलाई एक हजार नगद दिएर फकाउन खोज्ने एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । बोडे बस्ने २६ वर्षीय महोमद दिल्दार मिया नामका भारतीय नागरिकलाई शनिबार बेलुका
जुवातास खेल्ने २० जना पक्राउ
काठमाडौं । राजधानीका विभिन्न स्थानबाट जुवातास खेलिरहेका २० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नागर्जुन नगरपालिका–४ बाफल बस्ने ३५ वर्षीय सुर्यमान श्रेष्ठको सुमन गेष्ट हाउसमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा श्रेष्ठ लगायत
प्रदेश ३ को राजधानी ‘हेटौँडा’ नाम ‘बागमती’ दुई तिहाइले पारित
मकवानपुर । प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानी हेटौँडा र नाम बागमती कायम भएको छ । आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानी कायम गर्ने प्रस्वाव दुई तिहाइ बहुमतले
प्रदेश ३ को राजधानी हेटौँडा नै पारित
हेटौडा । प्रदेश ३ को राजधानी अनततः हेटौँडा नै पारित भएकाे छ । प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकको ९५ दशमलव ५ प्रतिशत मतले राजधानी हेटौँडा नै पारित भएको हो । राजधानी हेटौँडा
बिहानै दुर्घटना, घरमै जोतियो बस
काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित मूलपानीमा बस दुर्घटना भएको छ । दुवाकोटसिथत इन्जिनियरिङ कलेज, मूलपानी हुँदै रत्पपार्कसम्म चल्ने बा २ ख ५९८८ नम्बरको बस पिपलबोट नजिक
नेपालमा रेल चलाउनेको योग्यता तोकियो
विधेयकको दफा २३ उपदफा १ को (क) मा कम्तीमा माध्यमिक तह (दश जोड दुई) वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
‘खरिद ऐन र न्यायालय विकासमैत्री भएनन्’
काठमाडौं । विकास समितिका सदस्य गणेश पहाडीले नेपालको खरिद ऐन तथा न्यायालय विकासमैत्री नभएको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित द हिमाल एजुकेशन फाउण्डेशन एण्ड रिसर्च सेन्टरको १५औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै
घर छाड्नुअघि विनयले लेखेका थिए तीन पाना ‘सुसाइट नोट’
एमसीसी नितान्त अन्तराष्ट्रिय साझेदारी हो : अमेरिका
काठमाडौंमा बिहानै हुस्सु
शेरबहादुर देउवा पाल्छन् भैंसी, बेच्छन् खीर (भिडियोसहित)
२०७६ माघ ४ गतेको राशिफल
शुक्रबारका सय समाचार